आहा ! मर्निङ्ग वाक - khabarsansar.com
आहा ! मर्निङ्ग वाक
बाबुराम बास्तोला । दिङ्ला –भोजपुर ।
बिहान करिब ४ः३० देखि ४ः४५ बजेको हुँदो हो । कुखुराका भालेको डाक, बाहिरतिर विभिन्न किराका सुमधुर आवाज,बजारमा तताततै डुलिहिड्ने कुकुरका भुकाईहरु कानमा पर्न थाल्छन्, हो त्यही आवाजले आखाँले नदेखे पनि कानले सुनेको हुन्छ र मरितरी निन्द्रा खुल्छ । तर न्यानो ओछ्यान छोडेर उठ्न मन त किन नै लाग्छ र । जब ५ बज्छ, ओल्लो कोठा पल्लो कोठामा सुतिरहनु भएका साथिहरुको मोवाइलमा अलाराम बज्न थाल्छ, अनि त निन्द्राले पुरै छोड्छ, त्यतिबेला पल्लो कोठाको ढोका खोलिएको आवाज कानमा पर्छ, अनि उठ्नु भएको हुन्छ पल्लो कोठाको साथी सन्सार कुथुमी राई, हो उहाँ उठेर नियमित नित्यकर्म सकेपछि मेरो ढोकामा पनि उठ्नुस् भन्ने संङ्केत स्वरुप ढ्याकढ्याकको आवाज आउछ । यसरी कहिले उहाँले मेरो ढोका ढ्कढ्क्याउनु हुन्छ त कहिले मैले उहाँको । त्यतिकैमा मोवाइलामा पनि घण्टी बज्छ, आँखा मिच्दै परतिर टेबुलमा राखेको मोवाइल उठाएर हेर्दा सेभ गरेको नाम देखिन्छ र त्यहाँ लेखिएको हुन्छ, कहिले जनकराज तामाङ, कहिले निमदोर्जे तामाङ, र कहिले ९८५…….देखिने के.पी. सर भनेर मैले बोलाउने आदरणिय सर कुल प्रसाद ताजपुरीयाको । तर उहाँको भने नम्बर मात्रै आउँछ किनकी उहाँको नम्बर मैले मेरो मोवाइलमा सेभ गरेको छैन, उहाँको नम्बर सजिलो भएकोले मलाई मुखै आउछ । तीन जना मध्ये एक जनाको प्रायः बिहानै आउने फोन कलहरु हुन् वा मैले गर्ने कलहरु । तर फोन चाहे जो सुकैले गरोस्, फोनमा आवाज सुनिन्छ “सर उठ्नु भयो, उठ्नु” । हो यति फोनमा एक मात्र वाक्य बोलेर फोन काटिइसकेको हुन्छ, त्यस पश्चात यता रेष्टरुम खाली भईसकेको हुन्छ र पालो आउछ मेरो । र नियमित नित्य कर्म सक्छु ।
यसरी संसार कुथुमी राईले मेरो वा मैले उहाँको ढोका ढकढ्क्याउनु, जनक तामाङ, निमदोर्जे तामाङ वा ९८५……को नम्बरबाट कल आउनु वा गर्नु अनि सर उठ्नु भन्नु को एउटै उद्देश्य हो, “मर्निङ्ग वाक” ।
हो आजकल अपवाद बाहेक प्रायः म मर्निङ्ग वाक जान थालेपछि मेरो बिहान उठ्ने शैलीमा पनि परिर्वन भएको छ । यदि मनिङवाक नजाने हो भने प्रायः ८ः०० बजेसम्म ओछ्यानमा पल्टिनै रहेको हुन्थे म । जुनदिन म मनिङवाक गएको हुँदिन त्यो दिन मेरो उठ्ने समयप्रति उति ख्याल पनि हुदैन । बिहानभर न्यानो ओछ्याउन छाड्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । ओछ्यानमै पल्टिएर मोवाइल खेलाउन थाल्छु । मोवाइलमा फेसबुक चलाउन र युट्युबका भिडियो हेर्न थाल्छु । जब म सामाजिक सञ्जालमा जोडिन्छु त्यहाँ नानाथरीका प्रसंगहरु फेला पर्छन् । भिडियो हेर्न थालेपछि त्यहाँ अनेकथरीका सामाग्रीहरु भेट्छु, कुनै राम्रा त कुनै नराम्रा । कहिले हिंस्रक खबर हेर्छु, कहिले उत्तेजित बनाउने, कहिले दुःखी तुल्याउने । अक्सर उत्प्रेरणा जगाउने, सकारात्मक भाव पैदा गर्ने सामग्री कमै मात्रै हेरिन्छ । यसरी दिनको सुरुवात नै खराब मुडबाट हुन्छ । त्यसपछि अल्छी मान्दै उठ्छु र खाना खाइरहँदा, कार्यालयमा काम गरिरहँदा बिहानकै कुराले पच्छ्याइरहन्छ । त्यताका कुरा छाडौ अब, त्यो अपवादको रुपमा बिहान मनिङ वाक नगएको दिन वा बिहान पानी परेको दिन भनेर भन्दा पनि हुन्छ ।
आजकल भदौ महिनाको समय, दिन छोटो अनि रात अलि लामो भएको समय । बिहान ५ः३० बजे ट्रयाक,जुत्ता लगाएर तयारी भए पश्चात सुरु हुन्छ मर्निङ्ग वाक । तर गतव्य भने लामो होइन, बालागुरु षडानन्द अधिकारीको कर्मभुमी, तपोभुमी दिङ्ला टुडिखेल । म र संसार कुथुमी राई हामि बसेको घरबाट चोकसम्म पुग्दा विजय चौधरी,जनक,निमदोर्जे र केपीसरहरु चोकमा आइसक्नु भएको हुन्छ । र पहिलो वाक्य हुन्छ गुड मर्निङ सरहरु । यसरी भेटेपश्चात गफ गाफ गर्दै सामान्य जगिङ गर्दै गन्तव्य तर्फको यात्रा सुरु हुन्छ । जनक सर अलि बढि जोक गर्नु हुन्छ र प्रायः हसाई नै रहनु हुन्छ यसरी हासेर नै दिनको सुरुवात भएको हुन्छ ।
गफगाफ गदै टुडिखेल सम्म जादै गर्दा मलाई बिहानीको उज्यालोको र मन्द हावाको कोमल स्पर्श मनपर्छ । स्नेह र स्वच्छताको अनुभूति हुन्छ । ऊर्जा र आशीर्वाद पाएझैं लाग्छ । करिब एक किलोमटिरको सामान्य हिडाई पछि पुगिन्छ टुडिखेल । तर हामि पुग्दा एक हुल महिला साथिहरुको टोली पुगेर टुडिखेलको एकाछेउमा रहेको हेलिप्याडमा मकालु हिमालको कोमल हावा संगै लडिबडि गरिरहनु भएको हुन्छ, यसको अर्थ शारिरीक व्यायाम सुरु गर्नु भएको हुन्छ । हामि टुडिखेल पुग्दा चाँदी झै सेतै टल्किएको, हिउँलाई छातिमा टाँसेर मकालु हिमाल हाँसिरहेको हुन्छ । त्यतिबेला मलाई राजु लामाको गीतको याद आउछ, र सायद गुनगुनाउछु पनि कहिलेकाहिँ ।
तिमिलाई देखेर हिमाल हाँसेको,
तिम्रो गीत सुनेर मुनाल नाँचेको ।
मलाई लाग्छ, हामिलाई नै देखेर मकालु हिमाल मुस्कुराई रहेको । अनि फेरी मलाई लाग्छ कहिले पुग्ने होला त्यहाँ । अर्का एक मित्र सागर ढकाल(सव इन्जिनियर) ट्रेकिङको लागि रुची राख्नुहुन्छ र उहाँ भन्नु हुन्छ यो वर्ष जसरी पनि मकालु वेशक्याम्प जाने हो, म पनि सम्झन्छु र भन्छु जसरी पनि जाने । यति हुदै गर्दा साथीहरुले कुद्न सुरु गरिसक्नु भएको हुन्छ र पछ्याउछु म पनि । टुडिखेल करिब ५ फन्को मारिसकेछि त्यहाँको दुबोमा अझ बिहानी सितमा र्बलङग पल्टिनुको मज्जा नै बेग्लै । पाँच फन्को टुडिखेल कुद्दै कुद्दै पार गर्दा शरिरभरी पसिनै पसिना भएको हुन्छ, त्यसरी कुदेर चिसो भुईमा लड्दा केहि आनन्दको महसुस हुन्छ अवश्य पनि । अझ मकालु हिमालको चिसो,मन्द, कोमल र स्वस्छ हावा सिरिरी चल्दाको आनन्द नै बेग्लै । त्यसरी म सुतिरहदा साथिहरु सागर ढकाल, रोशन परियार, निकेश अटल, प्रसान्त थिङ र रोषन शाहहरु आएर दौडन सुरु गर्नु हुन्छ, । उहाँहरु दौडदै गर्दा प्रायः म सुतिरहेको हुन्छु, त्यसरी सुतिरहदाँ मलाई मकालु हिमालले गिज्याएको जस्तो लाग्छ, उसले भनिरहेको जस्तो लाग्छ “म निरन्तर अविचलित रुपमा यसरी उठिरहदाँ तँ भने सुतिरहन्छस्,” । तर पनि म सुतेर नै मकालु हिमालको सौन्दर्यता र कुमारीत्वमा रमाइरहेको हुन्छु, हावामा रहेको हिमाली झोँका अनुभव गरिरहेको हुन्छु । अटल चाँदीका चुचुरोमा सुनको जलप लगाएर उदाउँछ मेरो बिहान । सुनौलो बिहानीको सुमधुर गीत गाउँदै चुरीफुरी गर्छ चिवेचरी तल गाउँघरतिर । परेवाको जोडीले प्रेम साट्छ एकाबिहानै घरको धुरीमा बसेर । बिहानलाई ब्युँझाउने कर्तव्य निर्वाह गर्छ कागले प्रत्येक बिहान । चिलाउनेको झोपिलो फुर्कोमा गुँड बनाएर वर्षौदेखि वचेरा हुर्काउँदै आएको छ कागको जोडीले । जुठेल्नोको थाँक्रोको टुप्पोमा बसेर दिनको जोखना हेर्दै आङ् तान्दैछ गौंथलीको जोडीले ।
उसै त टुडिखेलमा त्यहाँ पलाएका घाँसहरुले हरियाली त्यसमा पनि छेउमा रहेका वर पीपलले सौन्र्दय छरिरहेको छ , सान दिइरहेको छ । टुडिखेलबाट वारीपारी घुमेर हेर्दा मकालु हिमाल संगै धेरै संख्यामा सेतै हिउँले ढाकेका पहाडहरु, भोजपुरकै अग्लो सिलिचुङ डाडाँ, संखुवासभाका धेरै ठाउँहरु, षडान्नद नगरपालिकाकै पर्यटनको आर्कषणको रुपमा रहेको साउने डाँडा, सुन्तले, तिनतले देखि लिएर अरुण उपत्यकाको धेरै क्षेत्र र धनकुटाका केहि क्षेत्र समेत देख्न सकिन्छ । अझ तलतिर हेर्दा अरुण नदि माथीको सेतो बादलमा ताल झैं देखिने बाक्लो हावाको पर्दा, यस्तै यस्तै दृष्यले म मा भावना र शब्द संचार अनवरत हुदै जान्छन् । आकाश खुल्दा यहाँबाट उत्तरतिरका हिमाल लहरै देख्न सकिन्छ । ति दृश्य झनै मनोमोहक छन् ।
कुनै युवतीले ओडेको सेतो पछ्यौरी हावाले उढाउन लाग्दा सम्हालेको जस्तो दृश्य देखिने बादलका थुम्काहरु, पूर्णतः खुलेको आकाश, उत्तरतर्फ मुसुक्क मुस्कुराए जस्ता देखिने हिमश्रृङखलाका दृष्य नियाल्दै नियाल्दै सबै साथीहरु आ आफ्नै पारामा कोही नाच्ने, कोहि सेटअप गर्ने, कोही डोरी नाघी खेल्ने आदि कार्यहरु गरिहेको हुनुहुन्छ । म पनि उठेर केहि पटक डोरी नाघी खेल्छु । त्यतिबेला जनकले एक टुक्का दिएर हसाईसकेको हुन्छ । सन्सार सर थोरै लागेको भुँडी घटाउन भन्दै सेटअप गरिरहदाँ हामि भन्दा बढि नै कसरत गर्न सक्ने केपी सर र निमदोर्जे सरहरु पनि आफ्नै पारामा शारिरीक व्यायाम गरिरहनु भएको हुन्छ, बेलाबेला मस्द मुस्कानमा हास्दै त कहिले खित्का छाडदै ।
यता सागर, रोषन,प्रशान्त र निकेश सरहरु कुदेर थाकेर एक पारामा शरिर हलइरहदा सबैभन्दा मोटो मन्दिप राई भने डोरी नाघी खेल्नमा व्यस्त देखिएको दृष्य रमाइलो लाग्छ । त्यो संगै हेलिप्याडमा मकालु हिमालको हावासंगै लडिबढी गरिरहने महिला साथीहरुको छेउमा एउटा स्पिकर बजिरहेको हुन्छ, त्यसैको धुनमा एक तमासमा उहाँपनि पनि शरिरलाई चलायमान बनाइरहनु भएको हुन्छ,त्यतिकैमा कसैले कसैलाई जिस्काको आवाजमा अझ आजकलको भाषामा भन्दा साइड मारेको पारामा केहि कुरा फुत्त निस्कन्छ,(प्रायः जनकको) त्यहाँ हाँसोको गुन्जयमान हुन्छ । एकाछेउमा बसेर यि सबै दृष्य नियाल्दाका रमाइलो अनुभुती त मलाई थाहा छ ।
यसरी प्रत्येक बिहान सयौं पंक्षीहरुको सुमधुर कलवरले गुञ्जयमान हुन्छ मेरो वा हाम्रो परिवेश । बिहानीको समयमा दिङ्लाको आगनमा नाच्छन्,गाउँछन्,रमाउँछन्, बिहानीको हार्दिक स्वागत गर्छन् र दिनचर्यामा जुट्छन् पंक्षीहरु समेत । उतै नाच्न, गाउन, रमाउन आमन्त्रण गर्छ पंक्षीहरुको संसारमा हामिलाई । आफ्नो आफ्नो संसार । नाचिरहेको पक्षीहलाई एका कुनामा छोडेर हामि आफ्नै धुनमा त्यही बिहानीको बहारसंग रमाउनमा मस्त हुन्छौँ, उफ्रेर, डौडेर, नाचेर, हासेर गुरु षडानन्द अधिकारीको काखमा, अरुण उपत्यकाको काखमा, मकालु हिमाल र साउने डाँडाको कोमल हावामा ।
भौगोलिक हिसाबले केहि बिकट भएता पनि प्राकृतिक सौदर्यताले भरीपुर्ण छ, भोजपुर जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने षडानन्द नगरपालिका । षडानन्द नगरपालिका बाट देखिने चारैदिशामा एउटा न एउटा महत्वपुर्ण स्थानहरु रहेका छन् । पारी भएपनि नजिकै देखिने मकालु हिमालको छहारी, अरुण उपत्यकामा अरुण नदिले बनाएका नागबेली, साउने डाँडा, सिलिचुङ डाडा लगायतका स्थानहरु, सधैँ हासिँरहेका जस्तो देखिने टुडिखेलबाट शुभ प्रभातको घाँमको झुल्को संगैआँउने हिमालका दन्ते लहरहरु सुरु हुन्छन अनि सितल र पबित्र छाँया आउछ । सूर्यका सुनौलो र सुकुमोल किरणहरु जब हिमाललाई स्पर्श गर्दै आउँछन् । अनि अझै मन फुरुङग भएर आउछ । केहि समय बितिसकेछ, दैनिक जसो यसरी नै होचिदै, खुम्चिदै, चेप्टिदै टुडिखेलमा डौडिएको उफ्रिएको । यसरी बालागुरु षडानन्दको जन्मभुमी, कर्मभमी दिङलाको काखमा, अरुण उपत्यकाको खोकिलामा लडिबडि गर्दा कसलाई पो आनन्दको अनुभुती हुदैन र । त्यसैले पनि एक पटक दिङ्गला घुम्नै पर्छ भन्ने मेरो दाबी हो ।
एक दिनको कुरा हो । षडानन्द नगरपालिका उपप्रमुख मेरिका राईले भन्नु भयो ‘म पनि मनिङ्ग वाक जाने’ । भोलिपल्ट बिहानै उहाँलाई फोन गरियो, फोन उठेन, दिउसाँे सोधेँ फोन उठाउनु भएन भनेर, उहाँको जवाफ थियो, ‘निदाएछु भोली जान्छु’ । पछिल्लो दिन नभन्दै उहाँ आफैले फोन गर्नु भयो र भन्नु भयो ‘म पनि जान्छु,’ हवस् भनेर हामि चोक पुग्दा नपुग्दै उहाँ आइसक्नु भएको थिएछ । अरु दिन भन्दा त्यो दिन निक्कै मज्जाले उघ्रिएको दिन भए पनि उहाँले “आज पानी किन नपरेको भन्नु भयो”, मैले पनि जिज्ञासाले सोधेँ किन ? भनेर । उहाँको जवाफ थियो ‘सुत्न त पाइन्थ्यो’ । उहाँ थप्दै हुनुहुन्थ्यो “म त फेरी फर्केर गर सुत्छु”, मैले सम्झे मलाई पनि सुरु सुरुमा यस्तै भएको थियो । सुरु सुरुमा म पनि मर्निङ्ग वाक बाट कोठा पुगेर सुतेको थिए । तर आजभोली उहाँ पनि निरन्तर मर्निङ्ग वाक जान थाल्नु भएको छ, सायदै टुडिखेलको चिसो र कोमल हावाको रसस्वादन गर्न पाएर होला । अझ अरुण उपत्यकाको कौमारित्वमा आखा लागेर होला । त्यसैले दिङ्लाको टुडिखेलसम्म मात्रै भए पनि मर्निङ्ग वाक जानुको मज्जा नै छुट्टै । त्यसरी नै बिहानीको कोमल सुर्यको किरणहरुलाई पछि पार्दै सुन्दर दिङ्ला बजारको एक होटलमा तातोपानी, चिसोपानी र चियाको चुस्कि पछी सबै आ आफ्नो कोठा तिर लागिन्छ पुनः दिउसोँ कार्यालयमा भेट्ने बाचा सहित । मर्निङ वाकले पनि हाम्रो नाता, यो प्रकृति, त्यो हिजो,यो आज अनि त्यो भोलि, सबैलाई एकातावद्ध बनाएको छ, एउटै अंगालोमा बाँधेको छ ।
वास्तवमा मेरो अनुभवमा दिनको सुरुवात सही र सकारात्मक ढंगबाट गर्न सकियो भने हामी दिनभर उर्जाशिल रहन्छौं । बिहानको कर्मले हामीलाई दिनभर ताजा राख्छ । त्यसैले हाम्रो दिन राम्रो र सार्थक ढंगले बित्छ । भगवान बुद्धले भनेका छन्, ‘हरेक बिहान मानिसले एक नयाँ जन्म लिन्छ ।’ त्यसैले हरेक दिन तपाईको निम्ति विशेष हो । हरेक दिनले तपाईका लागि उत्तिकै चुनौती र अवसर लिएर आएको हुन्छ । त्यसैले वर्तमानको क्षणलाई कसरी अर्थपूर्ण बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
भनिन्छ, दिनको सुरुवात हाँसी खुसी सुरु गरियो भने मनभित्र सकारात्मक भाव जागिरहन्छ । हामीले जुन हिसाबले दिनको सुरुवात गर्छौ, दिनभर त्यसको प्रभाव रहन्छ । बिहान जतिबेला हामी उठ्छौं, शरीर चंगा हुन्छ । मन सफा हुन्छ । थकान हुँदैन । तनाव हुँदैन । हो, यही क्षणमा हामी आफुलाई खुसी तुल्याउन सक्छौं । त्यसैले मर्निङ्ग वाकको मज्जा नै छुट्टै, आहा! मर्निङ्ग वाक । मेरो बिहान । मेरो प्यारो बिहान । बिहानीसित मेरो प्रेम साटिएको छ ।